थर्मल प्याड, थर्मल पोट्टि,, थर्मल ग्रीस, इलेक्ट्रोनिक सिलिकॉन निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन कारखाना â € "शेन्ज़ेन टेन्सन सीओ, लि।
प्रमाणपत्र र बौद्धिक सम्पत्ती
थर्मली कन्डक्टिभ सिलिकोन
एलईडी सिलिकॉन चिपकने
तरल सिलिका जेल
एक्रिलेट एबी चिपकने
थर्मल पोट्टि pot सामान्य पोटिंग सामग्रीको लागि उपयुक्त छ विद्युत आपूर्ति, कनेक्टरहरू, सेन्सरहरू, औद्योगिक नियन्त्रणहरू र ट्रान्सफार्मरहरूको लागि।
टर्मल पटिंग दुई भाग, १ देखि १ मिक्स, गाढा खैरो, सामान्य उद्देश्य encapsulant withgood प्रवाहशीलता र ज्वाला प्रतिरोध।
> उत्कृष्ट हीट प्रतिरोध सिलिकॉन ईन्कापसुलन्ट वाटरप्रूफ> सिलिकॉनमा आधारित वाटरप्रूफ सिलिकॉन ईन्कपसुलन्ट उच्च तापीय चालकता> एलईडी पावर ड्राइभर वाटरप्रूफ सिलिकॉन औष्मिक रूपले कन्डक्टिभ ईन्काप्सुलन्ट
थर्मल ग्रीस विभिन्न मध्य देखि उच्च अन्त पीसीबी प्रणाली सम्मेलनमा एक इन्टरफेस सामग्रीको रूपमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। टेन्सन थर्मली पेस्ट सिलिसन सामग्री जस्तै ग्रीस हो, भारी गर्मी-प्रवाहकीय धातु अक्साइडले भरिएको। यो संयोजनले उच्च तापीय चालकता, कम ब्लीड र उच्च-तापमान स्थिरतालाई बढावा दिन्छ। यौगिकहरू विद्युतीय उपकरण वा पीसीबी प्रणालीबाट गर्मी सि s्क वा चेसिसमा ताप स्थानान्तरण सुधार गर्न सकरात्मक उष्णता सिंक सील कायम राख्न डिजाइन गरिएको छ, जसले उपकरणको समग्र दक्षतामा वृद्धि गर्दछ।
एक विशेष प्रक्रियाको प्रयोग गरेर, टेन्सन थर्मल प्याडले सिलिकॉनलाई आधार सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्दछ, थर्मल प्रवाहकीय पाउडर र ज्वाला retardant सँगै जोड्दा मिश्रणलाई थर्मल इन्टरफेस सामग्री बन्न। टेन्सन थर्मल प्याड गर्मी स्रोत र तातो सिink्कको बीचको थर्मल प्रतिरोध कममा प्रभावकारी छ।
उच्च प्रदर्शन तटस्थ उपचार इलेक्ट्रोन्सी सिलिकॉन चिपकने / सीलेन्ट, एक भाग चिपकने / सिलेन्ट कडा, लचिलो रबरमा â € ures उपचारहरू लागू गर्नुहोस् many € many धेरै सब्सट्रेटहरूमा उत्कृष्ट आसंजन।
शेन्जेन टेन्सन कं, लिमिटेड शेन्जेन विशेष आर्थिक क्षेत्र मा जुलाई २०१ in मा स्थापित भएको थियो। ०ur कम्पनी, उच्च-टेक कम्पनीको रूपमा, जैविक सिलिकॉन र साइजिंग प्रोग्राम आर एंड डी, निर्माण, बिक्री र सेवामा संलग्न पेशेवर हो। कम्पनीको मुख्य उत्पादनहरू पट्टि,, सिलिकॉन, इपोक्सी राल, थर्मल ग्रीस र साइजिंग प्रोग्राम हुन्। हाम्रा उत्पादनहरू मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक उपकरण उद्योग, घरेलु उपकरण उद्योग, प्रकाश उद्योग, अटोमोबाईल उद्योग, फोटोभोल्टिक उद्योग, मोबाइल फोन उद्योगमा लागू हुन्छन्। बेल्ट र रोड रणनीतिका कारण हाम्रो कम्पनीले बेल्ट र रोड विस्तार गर्न खुला रणनीति जोडतोडका साथ लागू गर्दछ। शाखा र कार्यालय थाइल्याण्ड, भियतनाम, भारत, फिलिपिन्समा खोलिएको छ। सेवा स्थानीयकरण कम्पनी सेवा दक्षता सुधार गर्न। हाम्रो कम्पनी दृढ रूपमा यस पेशा पालन गर्छन चौतारी सिलिकॉन प्रयोग र समाधानको साथ घरेलू र विदेशी ग्राहकहरूको लागि उत्कृष्ट सेवाहरू प्रदान गर्न मूल्य सिर्जना गर्दछ।
पट्टि ad adhesives सफा गर्न के गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ? के यो सब्सट्रेटमा संक्षारक छ?
पट्टिंग गोंद एक प्रकारको चिपकने वाला प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ, उपचार पछि यो गोंदले shock shock, नमी-प्रुफ, इन्सुलेशन, थर्मल चालकता, सीलिंग, र अन्य प्रकारको विद्युतीय आवश्यक प्रदर्शन, विद्युतीय उपकरणहरूको उत्पादनमा प्रयोग गमलाउने गोंद प्राप्त गर्न सक्दछ। विद्युतीय सुरक्षाको उपयोग, पानीमा प्रवेश गर्न सजिलो छैन, विद्युतीय कम्पोनेन्टको दीर्घकालीन संरक्षण, सुरक्षित र वातावरण मैत्री को उपयोग।
के पट्टि ad Adhesives को लागी कुनै प्रक्रिया छ? विशिष्ट निर्माण प्रक्रियाहरू के हुन्?
प्रयोगकर्ताहरूको लागि जो पट्टि ad Adhesives को सही अपरेशन जान्दैनन्, Adhesive को पूर्ण प्रदर्शन खेलमा ल्याउन सकिदैन। कहिलेकाँही यो सँधै चिपकने गुण हुँदैन जुन अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न असफल हुन्छ, तर यो अपरेटिंग प्रक्रियाहरूमा सम्बन्धित हुन सक्छ।
सिलिकॉन हातले वा मेसिनले काम गर्नु राम्रो हो? मैले केमा ध्यान दिनु पर्छ?
जैविक सिलिकॉन प्रयोग गर्दा धेरै प्रयोगकर्ता समस्याको निर्माणको बारेमा बढी चिन्तित हुन्छन्, मुख्य निर्माण विधिहरू मैन्युअल निर्माण र मेशिन निर्माण हुन्। जब सम्म कारण को उपयोग को रूप मा, दुबैका उनीहरुको फाईदाहरु छन्।
थर्मली कन्डक्टिभ ईन्केपल्सुलन्ट
थर्मल प्रवाहकीय पोटिंग
पावर मोड्युलहरूको लागि थर्मल पोटिंग
थर्मल पोटिंग एलईडी ड्राइभर
थर्मल इन्सुलेट पटिंग कम्पाउन्ड
सिसिलोन थर्मल पोटिंग कम्पाउन्ड
थर्मल ग्रीस सेतो
शक्ति आपूर्ति थर्मल टाँस्नुहोस्
उच्च बेको लागि थर्मल ग्रीस
एलईडी बल्बको लागि थर्मल ग्रीस
एलईडी को लागी थर्मल टाँस्नुहोस्
पीसीबीको लागि थर्मल ग्रीस
थर्मल ग्रीस TS1105
सीपीयू को लागी Heatsink
थर्मल पेस्ट उत्तम
ठेगाना: एउटा भवन हो Hongहेng्गजियांग उद्योग पार्क, .6 नम्बर फे Fशेhe्ग रोड, लउकन, गोong्मिming टाउन, गुआming्गमि District्ग जिल्ला, शेन्जेन, चीन
प्रतिलिपि अधिकार @ २०२० शेन्ज़ेन टेन्सन कं, लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।